Muti weKisimusi une puff pastry uye chokoreti cream | ThermoRecipes
Muti weKisimusi wakagadzirwa nepuff pastry uye chokoreti cream
Kudya75 maminitsi10 vanhu
Ndinonyatsoda iyi recipe! Zviri nyore kugadzira uye zvakanaka kwazvo, zvekuti vadiki vanochida ... kana ukaona chiso chavanowana kana runako urwu rwasvika patafura ... ivo vachashamiswa! mabvazuva puff pastry muti wakazadzwa nechokoreti creamKunze kwekunge iri resipi inonaka, ndeimwe yezvinoyevedza. Kwemazuva ano ezororo revana, izano rakanaka kwazvo kuzviita navo. Ivo vanofarira kubatanidzwa mukicheni uye vozoona mhedzisiro inoshamisa kana yabuda muchoto. Uye wobva wawedzera kubata kwekupedzisira neshuga yechando, kuitira kuti iite seine chando. Chirongwa chikuru, pasina kupokana!
Zviri nyore chaizvo kuita. Iwe unongoda maviri ane squared puff pastry mapepa uye inonaka chokoreti cream yatichazogadzirira kumba mune yedu thermomix. Asi kana iwe uchida kuita kuti zvive nyore kana iwe usina nguva yekuzviita kumba, unogona kutenga zvakananga bhodhoro reNutella uye rizadze, iro richavawo rinonaka.
1 Muti weKisimusi wakagadzirwa nepuff pastry uye chokoreti cream
2 Chokoreti kirimu
Muti weKisimusi wepuff pastry uye chokoreti cream, kamukira yekugadzira nediki dzesaga uye unakirwe.
Kubika nguva: 30M
100 g ye cream cream (35% mafuta)
100 g yechokoreti fondant yezvokudya (50% cocoa) muzvidimbu
50 g butter pane tembiricha yekamuri (muzvidimbu)
2 zvimedu zvetsva rectangular puff pastry
1 zai jena (zvichida)
Tinoisa kirimu mugirazi uye tinopisa 2 maminetsi, 90 °, kumhanya 1.
Wedzera chokoreti nebhotela uye sanganisa 2 maminetsi, kumhanya 2. Tinoisa chokoti cream mundiro uye tinoisa mufiriji kwemaminitsi 30-40.
Vhura mapepa maviri epuff pastry, achiisiya papepa rekuputira (ichashanda kubika ipapo).
Isu tinoparadzira mukanyiwa nechokoti cream yatakanga tachengetera mufiriji (kana kana uchida iwe unogona kuzviita ne nutella zvakananga) uye kuifukidza neimwe pepa repuff pastry.
Nebanga rakapinza kana pizza yekucheka vhiri, tinocheka mukanyiwa mufir tree shape: tanga kugadzira trunk pachigadziko uye wozocheka zvidimbu zvemasendimita maviri, zvichienderana nechigadziko usingasviki pakati.
Tozopeta ka2-3 sekunge tichikungurutsa zviya zvekuchekwa taita kunge matavi emuti.
Tinoisa muti wacho nemapepa zvakananga patafura yekubikira, gadzirai nezai jena uye gadzirai kwemaminitsi 20-30 pa 180º.
Kana ichibuda muchoto, sasa mipendero neshuga yechando uye ushumire. Zvinonaka!
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Kubva pagore rimwe kusvika pamakore matatu, Nyore, Navidad
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Navidad » Muti weKisimusi wakagadzirwa nepuff pastry uye chokoreti cream
Chikafu chekiki chinodyiwa chekupa
Mbatata uye chickpea cream ine prawns